✨Yonke iSecluded Barn Suite Ctr Historic Carlisle✨ - I-Airbnb
✨Yonke iSecluded Barn Suite Ctr Historic Carlisle✨
INDAWO YONKE. Esi sisitudiyo esithe cwaka sabucala sahluke ngokupheleleyo kwaye akukho mimandla ekwabelwana ngayo.
Ifumaneka “edolophini” eCarlisle. Ukusuka apha unokulandela i-Rt. 225 East ukuya Bedford kunye Lexington okanye West ukuya Westford & Littleton kwaye ikufutshane Routes 128, 495 kunye 3. Okufutshane 33 imizuzu ukuqhuba ukuya Boston. Kufuphi neevenkile/indawo zokutyela zaseConcord ezinembali. Iimayile ezi-1.6 ukuya kwiindlela zokuHamba/ngebhayisekile zeGreat Brook Farm State Park.
*Iikhilomitha ezili-10 kuphela kwaye malunga ne-15 min drive ukuya eLowell ngeLowell Connector*
I-500sf yesitudiyo esihlaziywe kakuhle kunye nefanitshala ibonelela ngomnyango ofihlakeleyo wabucala, kunye nekhitshi lesidlo esilula: ifriji yentsimbi egcwele ubungakanani, imicrowave, iKeurig, izitya kunye nempahla, isinki ephindwe kabini. Qaphela: akukho sitovu.
Itafile ye-pub enomtsalane ibamba indawo yakho yokutyela.
Kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinesinki, indlu yangasese kunye neshawari.
Idesika enkulu enendawo eninzi yokwandlala indawo yakho yokusebenza.
I-TV yekhebula kunye nesantya esiphezulu sokufikelela kwi-Intanethi ye-WiFi.
Ibhedi elingana neKumkanikazi ikhululekile (ayiqinile kakhulu, ayithambekanga kakhulu)
Iseti yeFuton egcweleyo kunye ne-Suede Mattress kunye neeDrowa zokuGcina.
4.80 out of 5 stars from 378 reviews
4.80 · Izimvo eziyi-378
Kufuphi kwindlela yebhayisekile, iindawo zembali zaseLexington kunye nemizuzu nje embalwa yokuhamba ukusuka kwiipaki ezimbalwa zokugcina. IBoston, iBurlington, iWaltham, iArlington kunye neCambridge zikude kakhulu.
Kukho iindawo ezimbalwa zomhlaba zolondolozo phakathi komgama omfutshane wokuhamba. Ubumelwane bukwakhuselekile kakhulu.
Ngestudiyo sinesango laso uya kukwazi ukungena nangaliphi na ixesha emva kwentsimbi yesi-3pm, ngokukhululekileyo kwakho.
Nceda usazise ukuba ungathanda ukudibana nathi ngokobuqu njengoko sikuthanda ukudibana nabantu abatsha!